MBR Recovery - dayactir iyo dhammaan khaladaadka MBR dayactiro
> Resource > Ladnaansho > MBR Recovery: Sida loo dayactir MBR Dhibaatooyinka
Boot Record Macallinkii (MBR) waa waxa ugu horeeya ee aad PC eegayaa marka aad u bilowdo, maadaama ay tani waxa ay sheegaysaa meesha ay nidaamka qalliinka waxa uu ku yaalaa. Haddii ay wax faraha la diiwaankan, aad OS ma awoodi doono inuu ku soo bilowdo oo aan idiin noqon doonaa awoodaan in ay helaan wax ka mid ah xogta aad kombuutarka.
Waad sheegi kartaa marka ay jirto wax dhibaato ah oo MBR ee aad kombuutarka, maxaa yeelay, waxaad ka heli doontaa baadi tuuraa aad ee farriimaha qaar in ay yihiin caadiga ah ee dhibaatadan, sida "Boot failure: System hakiyey", "miiska xijaab aan saxnayn", iwm Haddii kale, waxaad la soo wajahay laga yaabaa in la kaliya screen maran iyo qoraalka ma at dhan.
Sidee wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka MBR la soo kabashada Master Boot Record
Sidoo kale waa inaad hubiso in ay jiraan lahayn drives dibadda ku xiran in laga yaabo in PC waa la isku dayayaan in ay kabaha ka. Haddii waxaas oo dhan ku guuldareysto, MBR u yeelan doonaan in ay la cusboonaysiiyey. Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa Naftooda macquul ah ooga hayaan joogto ah nidaamka, markaa arrintu ma ahan dhibaato, sababta oo ah waxa aad helaysaa disk kabashada diyaar u ah inuu gacanta reboot ka.
Haddii aadan haysan disk dayactir la heli karo, markaas Wondershare LiveBoot CD 2012 waa ikhtiyaarka ugu fiican ee soo socda u soo kabashada MBR .
Read tutorial ka socda iyo sida ay u samayn idin Toosiya.
Ka dib markii ay ku rakibidda LiveBoot ah, waxay u ordaan oo waxaa jiri doona Wizard ah aad ku hogaamiyay in la abuuro baabuur USB Downlaods ama tallaabo CD talaabo. Maxaad samayn lahayd waa in aad qaadato baabuur USB maran ama CD, oo geliso si aad u computer. Ka dib markii in, waa in aad ku gubi.
Haddii aad rabto in aad ku gubay dadka kale, waxa aad weydiisan kartaa mid ka Wondershare oo ay la socdaan si LiveBoot aad.
Step2. Boot computer ka Boot USB / CD
Geli ah drive USB Downlaods abuuray ama CD si aad u computer, bilowdo oo ay doortaan in ay u Boot ka LiveBoot. Bilowga ee bilowga ah, guji F12 si ay u dejiyaan booting computer ka USB ama CD-ROM ee, ka dibna waxaad ka heli doontaa menu boot this.
Step3. Qabtaan kabashada MBR
Marka helaan deegaanka kabaha, ka heli LiveBoot iyo riix "Windows Recovery", halkaas oo aad ka heli karto "MBR Recovery" dhinaca menu bidix. Waa in aad guji "MBR Recovery" badhanka si ay u dhamaystiraan ka soo kabashada Master Boot Record .
Markii ay soo kabashada MBR ku dhameysatay, kaliya qaataan soo drive USB Downlaods ama CD, iyo computerka aad sida caadiga ah si uu u hubiyo nidaamka qalliinka.
Sababaha keenaya khaladaad MBR
Waxa jira laba sababood oo laga yaabaa in aad qaladaad ka helay. Laga yaabaa in computer ayaa la isku dayay in ay kabaha ka disk ah in si fudud aan khaanada Downlaods, ama waxaa laga yaabaa in dhibaato ah MBR ama faylasha ay kabaha la xiriira. Si aad u hagaajin khaladaad MBR, waxaad isku dayi kartaa oo aad soo celin nidaamka ka horay u badbaadiyey soo celin dhibic ka dib markii on Dardar shaashadda. Haddii tani kaa joogsan waydo ama aadan haysan faylasha gurmad, waxaad u baahan tahay in ay isticmaalaan MBR software kabashada si ay u soo kabsadaan.